आइएसले अपहरण गरेका ३९ भारतीयको हत्या
काठमाडाै, ६ चैत। सन् २०१४ मा इराकमा अपहरण गरी बेपत्ता बनाइएका ३९ जना भारतीय नागरिकको हत्या भएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले मङ्गलबार सो कुराको पुष्टि गर्नुभएको हाे । भारतीय संसद्मा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले इराकमा तीन वर्षअघि निर्माणसम्बन्धी काममा कार्यरत ३९ जना भारतीय नागरिकको इस्लामिक स्ट्टेस (आइएस)ले हत्या गरेको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो । इराकको मोसुल सहरको उत्तरपश्चिम भागमा पर्ने बादुशमोमा नगरको दुर्गम क्षेत्रमा एक सामूहिक चिहान फेला परेको र उक्त चिहान तिनै भारतीय नागरिकको रहेको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो ।
गाडिएको अवस्थामा रहेका ३९ वटा शवको डिएनए परीक्षणबाट उनीहरु सन् २०१४ मा अपहरण गरी बेपत्ता बनाइएका भारतीय नागरिकको भएको स्वराजले संसद्मा जानकारी दिनुभएको छ । यद्यपी हिजो सोमबार संसदमा स्वराजले ३८ जनाको डिएनए नमूना परिक्षणबाट पुष्टि भएको र एक जनाको भने आंशिक मात्र मिलेको बताउनुभएको थियो । आइएस जिहादी समूहले स्न २०१४ को अक्टोबारमा इराकको मोसुल सहरबाट ती ३९ जना भारतीय नागरिकलाई अपरहण गरेका थिए ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, चैत ०६, २०७४१६:१६
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए बिजुली बनाउने नयाँ उपाय, अब हुनेछ यस्तो चमत्कार!
जम्मुमा पास्कितानी र भारतीय ‘सिमा सुरक्षा बल’ बीच दोहोरो झडप: ४ भारतीयको मृत्यु !
जथाभावी शहीद घोषणा हुँदा वास्तविक शहीदको अपमान भयो !
फौजी पोशाकमा रातिराति आउने को थिए ? कतै हुसेनको हत्या लैनचौरमा त डिजाइन भएको थिएन ?
व्यवसायीले मागेकै रुट दिँदा यातायात अस्तव्यस्त !
देशभर यस्तो नयाँ सवारी नियम लागु हुँदै : अब बीस वर्ष पुराना गाडीहरु बन्द हुने